Mampitombo adihevitra ao Myanmar: sahan’akondro Kachin an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Mampitombo adihevitra ao Myanmar: sahan'akondro Kachin an-tsary
Voadika ny 28 Marsa 2019 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, Esperanto , বাংলা, Deutsch, English
Sary avy amin'i Nan Lwin / The Irrawaddy
Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny lahatsoratra navoakan'i Nan Lwin tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Myanmar, sy navoaka eto amin'ny Global Voices indray.
Velona isaky ny amin'ny fito ora maraina ity sahan'akondro mivelatra amin'ny velarana 200 hekitara ao amin'ny fanjakana Kachin State an-tanànan'i Lamyang ity. Miantsoroka baon'akondro maitso vao notazana isa-maraina ny mpiasa, na lahy na vavy izay avy amin'ny fanjakana Rakhine ny ankamaroany, ary mankany amin'ny faritra iray ikarakarana ny akondro amin'ny fanakobanana azy sy fandomana azy ao amin'ny sinibe iray feno taharo shimika miloko fotsy. Tsy misy mahafantatra hoe inona io taharo io, saingy lazain-dry zareo hoe “mba hampaharitra ny voakanzo no anton'io”. Avy eo bataina — eo ambany fanarahamason'ny mpiadidy Shinoa — ny akondro ho ao anatin'ny kamiao 12 kodiarana izay hitondra azy any amin'ny fitodiana farany ao amin'ny faritanin'i Yunnan ao Shina.
“Manakaiky ny Adiny efatra any ho any ny mameno tanteraka ny kamiao iray. Aorian'izany izahay no mahazo ny sakafo atoandro,” hoy ny mpiasa iray.
Izany sehatra izany no ampahany kely dia kely amin'ny saham-pambolena akondro voatr'olombelona miely haingana dia haingana ao amin'ny Fanjakana Kachin. Araka ny tatitry ny minisiteran'ny Fambolena, ny fiompiana ary ny fitarihan-drano, ahitana 24 000 hekitara amin'ny karazan-tsaha fambolena toy izay ao Kachin. Nilaza anefa ny vondrona fiarahamonim-pirenena fa efa nahaisa mihoatra ny 70 000 hekitara amin'izany ry zareo ao amin'ny fanjakana Waimaw, Bhamo, Shwegu, Mansi, Momauk ary Dokphoneyan. Nahazo ny fanohanan'ny Shinoa ny ankamaroan'ny saham-pambolena ary ampangaina ho mangala-tany, manimba ny tontolo iainana ary manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa ireo Shinoa ireo.
Voarara any Laos sy Thailandy ny fambolena akondro voatr'olombelona fa feno dia feno azy kosa ao amin'ny fanjakana Kachin ravan'ny ady. Ny ankamaroan'ny toeram-pambolena nilaozan'ny Kachin nafindra toerana dia nosoloina ireo saham-pambolena ireo.
Araka ny tatitry ny vondrom-piarahamonim-pirenena, mampiasa fanafody sy etona famonoana bibikely ary zezika (shimika) ny orinasa, ary mametraka azy ireny tsy misy fitandremana. Milaza izy ireo fa mandoto ny rano, manapoizina ny tany ary mamono ny trondro sy ny biby fiompy ireo taharo shimika ireo.